प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई लुम्बिनी भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बिमस्टेक सम्मेलनको समापनपछि भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले मोदीलाई बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
थाइल्यान्डमा हुन लागेको कार्यक्रममा भाग लिन जान लाग्दा गैरकानूनीरुपमा विमानस्थलबाट फर्काइएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन माओवादीका बालसेना लेनिन विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिमस्टेक सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन शुक्रबार समापन गर्दै ओलीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनले मात्र यस क्षेत्रका जनताले लाभ हासिल गर्ने उल्लेख गरे ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना शुक्रबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अन्तर्गत लेवनानमा तैनाथ नेपाली शान्ति मिसनको निरीक्षण/अवलोकनका लागि शुक्रबार त्यसतर्फ गएका छन् ।
मुलुकी एेन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएकाे भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आइतबारदेखि देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतले २० करोड लागतमा पशुपतिमा बनाइदिएको ३९८ शय्याको धर्मशाला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका छन् ।
राहुल गान्धी काठमाडौं अाइपुगे
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी काठमाडौं अाइपुगेका छन् । उनी दिउँसो १:४५ मा इन्डिगो एअरलाइन्सबाट काठमाडौं उत्रिएका हुन् ।
रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको प्रारम्भिक प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन (प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) भारतले गरिदिने समझदारी भएको छ ।
तपाईंले पढेका पुस्तकमध्ये सबैभन्दा लामो शीर्षक भएको पुस्तक कुन हो ? त्यसको शीर्षक कति लामो छ ? दुई, चार, छ, आठ वा दश शब्द । तर, २० वर्षीय मेडिकल साइन्सका विद्यार्थी सृजन तिमिल्सिनाले आफूले लेखेको पुस्तकको शीर्षक १ हजार ८ सय ९ शब्दको राखेका छन् ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा समितिका सभापतिको निर्वाचनसम्बन्धी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार दिउँसो भेटवार्ता भएको छ ।
घनश्याम खड्का, कृष्ण आचार्य
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को सम्मेलन काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । राजधानी काठमाडौंमा भदौ १४ र १५ गते भएको सम्मेलन घोषणा पत्र जारी गर्दै समापन भएको हो ।
कञ्चनपुरमा १५ वर्षीया किशोरी बलात्कृत
१३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको देशव्यापी रुपमा विरोध भइरहेका बेला कञ्चनपुरका बेलडाँडी गाउँपालिकामा फेरी एक किशोरी बलात्कृत भएकी छिन् । बेलडाँडी गाउँपालिका–१ कि १५ वर्षीया किशोरी बिहीबार राति बलात्कृत भएकी हुन् ।
बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा अनुमोदन गर्नका लागि मंगलबार सदस्य राष्ट्रका विदेश सचिवहरुको १९ औं बैठकले तयार पारेको विद्युत् लाइन प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ को समझदारीपत्र (एमओयू) मा शुक्रबार उक्त देशका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा विदेश मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को दोस्रो दिन बहुपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । यससँगै बिमस्टेकको अध्यक्षता अब औपचारिक रुपमा श्रीलंकाले गर्ने भएको छ ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को सम्मेलन सकेर शुक्रबार सदस्य देशका कार्यकारी प्रमुखहरु धमाधम फर्किंदै छन् ।
वरिष्ठ कलाकार एवं रेडियो नेपालका पहिलो गायक तथा नाट्य धरोहर हरिप्रसाद रिमालको ९२ वर्षको उमेरमा आज बिहान उनकै निवासमा निधन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत व चाबीच शुक्रबार अपरान्ह दुई पक्षीय भेटवार्ता भएको छ ।
भारत गएका चार मध्ये एक नेपाली नागरिकको कतरनीयाघाट वन्यजन्तु आरक्षको सुगौली थाना नजिक विहीवार वेलुकी शव फेला परेको छ ।
माडीमा मान्छे मार्ने बाघलाई बिहीबार साँझ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ । भदौ ७ गते बिहीबार जंगल जाँदा हराएका माडी नगरपालिका–९ गोविन्दवस्तीका ५६ वर्षीय जितबहादुर राई भोलिपल्ट मृत फेला परेका थिए ।
विशेषज्ञसहितको सेवा दिने भन्दै स्तरवृद्धि घोषणा गरिएको ८ वर्ष पुग्दा पनि धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका २ भवन अझै बनेका छैनन् ।
विस्थापित भएर नेपाल छिरेका नेपालीभाषी भुटानीको आश्रयस्थल इलाम थिएन । उनीहरू झापा र मोरङमा रहे पनि अहिले एकाएक पुनर्वासमा गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर इलाममा पनि परेको छ । झापासँग जोडिएका दक्षिणी गाउँमा उनीहरू गएदेखि नै ‘न्यास्रोपन’ बढेको हो ।
शरणार्थीले भुटानसँगको अवरुद्ध वार्ता सुचारु गर्न नेपाल सरकारसित आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले राजधानीमा सुरु बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट अवरुद्ध वार्ता सुरु गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
समान माग दाबी भएको मुद्दा फुटाएर अलग–अलग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि गत बिहीबार र शुक्रबार मोरङ र सुनसरीका कानुन व्यवसायीले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरे ।
कल बाइपास, सुन चोरी, मिर्गौला तस्करीजस्ता आपराधिक गतिविधिमा बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिकै संलग्नता बढी भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।
कालीगण्डकीबाट दुई साताअघि नदीजन्य पदार्थ झिक्दै गरेका ८ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कुश्मा नगरपालिकामा पठायो । नगरपालिकाले प्रतिसाधन ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर छाडिदियो ।
जिल्लाका साना व्यवसायीलाई करबापत १५ सय रुपैयाँ तिर्न ३० हजार बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । करसम्बन्धी कारोबार गर्ने कुनै पनि निकाय जिल्लामा नहुँदा साना व्यवसायीसमेत प्रदेश ५ को नेपालगन्ज जान बाध्य छन् ।